Shiinaha CNC Machining Processing Warshada Su'aalaha Dhabta ah iyo alaab-qeybiyeyaasha |BAASILE
Adeegyada Samaynta Birta xaashida
Samaynta Birta Sheet Aluminium
Nooca Habka:Leexinta, Wax-shiidka, Qodista, Shiidanta, Tooshashada, Goynta WEDM, Sawir-qorid Laser, iwm.
Mashiinka saxda ah wuxuu u keeni karaa hab kasta oo wax soo saar ah heerka xiga.Waxay ka shaqayn kartaa yaabab hufnaanta hawl-qabadka, waxay yaraynaysaa wakhtiga soo noqoshada, waxayna dhimaysaa kharashka wax soo saarka.Yaa tan ka yaqaana mid ka mid ah Shiinaha ee waaweyn ee CNC Soo-celinta iyo wax-soo-saareyaasha qaybaha wax-soo-saarka ee leh khibrad 15 sano oo suunka hoostiisa ah?BMT waxay tan iyo markaas siinaysay qaybo sax ah oo sax ah warshadaha.
Kahortagga iyo xakamaynta gariirka farsamaynta farsamaynta:
Si loo baabi'iyo ama loo wiiqo xaaladaha soo saara gariirka mashiinka;Si loo hagaajiyo sifooyinka firfircoon ee nidaamka geeddi-socodka si loo hagaajiyo xasilloonida nidaamka geeddi-socodka iyada oo la adeegsanayo qalabyo kala duwan oo gariir ah
Waa maxay sababta aan u doorano Qaybahayada CNC Machined?
Si kooban u sharax kala duwanaanshaha ugu weyn iyo codsiyada kaararka habsocodka, kaadhadhka habsocodka iyo kaadhadhka habraaca ee mishiinka.
Kaarka habraaca: iyadoo la isticmaalayo habka habaynta caadiga ah ee wax soo saarka dufc yar oo keliya.
Kaadhka Farsamada Farsamada Farsamada
Kaarka farsamada farsamaynta makaanikada: wax soo saarka dufcaddii.
Kaarka habka: nooca wax soo saarka tirada badan wuxuu u baahan yahay urur adag oo taxadar leh.
Mabda'a xulashada bartilmaameedka adag?Mabda'a xulashada bartilmaameedka wanaagsan?
1. Mabda'a ah hubinta shuruudaha booska labada dhinac;
2. Mabda'a hubinta qaybinta macquulka ah ee gunnada mashiinnada ee dusha sare ee mashiinka;
3. Mabda'a ku habboon xajinta workpiece;
4. Mabda'a ah in datum-ka dhabta ah aan dib loo isticmaalin guud ahaan
1. Mabda'a isku dhafka datum;
2. Mabda'a halbeegga midaysan;
3. Mabda'a halbeegga labada dhinac;
4. Mabda'a bar-tilmaameedka is-u-adeegsiga;
5. Way fududahay in la isku dhejiyo mabda'a.
Waa maxay mabaadi'da isku xigxiga geedi socodka?
a) Marka hore ka baaraandega heerka xogta, ka dibna ka baaraandegto sagxadaha kale;
b) Kiisaska kala badh, dusha ayaa marka hore la farsameeyaa, ka dibna daloolka ayaa la farsameeyaa;
c) Dusha sare ayaa marka hore la farsameeyaa, tan labaadna waa la farsameeyaa mar dambe;
d) Diyaarso habka roughing marka hore, ka dibna habka dhamaystirka.
Sidee loo qaybiyaa heerka habaynta?Waa maxay faa'iidooyinka qaybinta heerarka habaynta?
Qaybinta marxaladda habaynta:
1) Marxaladda mashiinka qallafsan
3) Marxaladda Dhamaystirka
4) Marxaladda dhamaystirka saxda ah
Waxay xaqiijin kartaa waqti ku filan si loo baabi'iyo qallafsanaanta kulaylka iyo walbahaarka haraaga ah ee ay keento mashiinnada qallafsan, si loo hagaajiyo saxnaanta mashiinnada xiga.Intaa waxaa dheer, marxaladda farsamaynta qallafsan ee la helay cilladaha madhan maaha in lagu farsameeyo marxaladda xigta ee farsamaynta, si looga fogaado qashinka.Intaa waxaa dheer, isticmaalka macquulka ah ee qalabka, qalabka mashiinnada saxda ah ee hooseeya ee loogu talagalay mashiinnada qallafsan ee mashiinka saxda ah ee dhamaystirka, si loo ilaaliyo heerka saxda ah ee qalabka saxda ah;Habaynta macquulka ah ee ilaha aadanaha, shaqaalaha tignoolajiyada sare ee ku takhasusay farsamaynta saxda ah ee saxda ah, taas oo aad muhiim u ah si loo hubiyo tayada alaabada, hagaajinta heerka tignoolajiyada.
Hore: Adeegga Qaybaha Mashiinnada ee CNC ee Gaarka loo sameeyay
Xiga: Xirfadlayaasha OEM CNC Machined Parts
Habaynta Mashiinka Mashiinka ee CNC Standard
Barnaamijyada iyo Xirfadaha CNC
Mashiinka CNC wuxuu u baahan yahay casriyeyn 2
CNC Machining Go'aami tirada goynta
Qaybaha birta xaashida-dhamaadka-sare ee la habeeyey, Qaybaha Mashiinada Saxda ah, Mashiinka gaarka ah, Machining sax ah, Cnc Titanium Machining, Makiinada,